Global Voices teny Malagasy » Ny Fomba Nitazonana Ny Hiran-drazana Hmong Ho Velona Any Andrefan’i Amerika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Mey 2016 2:47 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsinanana, Etazonia, Laos, Thailandy, Vietnam, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 26 May 2016 ity lahatsoratra ity, ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifampizaràna votoaty.
Eritrereto ho toy ny hira tononkalo ny kwv txhiaj.
Na mbola tsaratsara kokoa, eritrereto ho toy ny endrika blues fa amin'ny endriny Hmong.  Ary amin'izay fotoana izay, eritrereto amin'ny fomba nieritreretan'ilay Amerikana mpanoratra, Ralph Ellison, ny blues ny kwv txhiaj : “tantaram-piainana itanisàna ireo fahavoazana manokan'ny tena aseho amin'ny alalan'ny tononkira.”
Manomboka boky iray vaovao momba ny kwv txhiaj ny fitanisàn'i Ellison sy ny iray amin'ireo mpiventy azy, lehilahy iray antsoina hoe Bee Yang. Ny zanany vavy, Kao Kalia Yang, no nanao ilay tantara, izay nahazo ny loka ho an'ny mpanoratra. Antsoina hoe “The Song Poet: A Memoir of My Father . (Ilay Poetin'ny Hira: Fahatsiarovana Ny Raiko)”
Asehon'ny bokiny fa, toy ny blues, ny kwv txhiaj dia afaka mampitony ny fanahy.
“Mampifandray ahy amin'ny raiko io,” hoy i Yang. “Mahafantatra azy daholo ny olona rehetra aty Amerika, ary ny ankamaroan'ny fiainako dia niresahako momba azy amin'ny maha-mpanamboatra milina azy. Saingy fantatro fa tao am-pony sy tao an-tsainy izy dia poetin'ny hira. Araka izany, rehefa mandre kwv txhiaj aho, dia mieritreritra lehilahy iray izay, fotoana elabe talohan'ny nitaingenako bisikilety na namiliako fiara, teo an-tsorony no nitazanako ny tontolo. Ireny soroka ireny no nampiakatra ahy ho eny an-tendron-kazo ary niteny hoe, ‘Indray andro any, tsy ny tànana sy ny tongotra kelinao no hibaiko ny zotram-piainanao. Handia faravodilanitra izay tsy mbola nodiavin'ny rainao velively ianao.’ Araka izany dia mieritretìritra ireo teniny sy ny hoavy tsinjony ho ahy aho rehefa mandre kwv txhiaj.”
Hoavy iray izay miavaka tsy toy ny lasa rakotry ny ady. Nandositra an'i Laos  nankany aminà toby iray fialokalofana tany Tailand ny rainy nandritra ny adin'i Amerikana tao Vietnam, ary tamin'ny 1987 dia nitondra ny ankohonany ho any amin'ny fanjakàna amerikàna ao Minnesota.
“Amin'ny maha-zaza avy amin'ny vahoaka Hmong ahy, dia fantatro fa avy any an'ady izahay. Rehefa nitombo tao Amerika, tsy nahalala velively mihitsy aho hoe ady toy ny inona ilay nahatongavanay satria amin'ireo tantara any an-dakilasy dia ny Adin'i Vietnam nifanaovan'ny Amerikana sy ny Tafika Vietnamiana Tavaratra ihany no nianaranay,” hoy izy. “Tena faran'izay mampahaleho, raha ny eritreritro, izany maha-avy aminà vahoaka iray nofongorina tanteraka teo amin'ny tantara anao izany. Nezahan'ny raiko sy ireo hafa mpihira ny hiran-drazana Hmong kwv txhiaj ny handrakitra azy io tany anatin'ny hiran-dry zareo, ireo tantaran'ny nahatongavan'ny ady teny amin'ny vahoaka, ny fomba namoizana aina, ary ny fomba nijoroanay indray.”
Tantara ihany koa ny kwv txhiaj araka izany.
Manampy i Yang fa ho an'ireo ankizy marobe mpitsoa-ponenana toa azy, miantso azy ireo hody sy manangana an-dry zareo ireo hira toy ny kwv txhiaj. Ary vitsivitsy voafantina ihany no afaka manao izany.
“Tsy afaka ny ho mpihira kwv txhiaj fotsiny izao ianao. Mila manana fanomezam-pahasoavana eo am-pahaterahana ianao satria ny feonao no hany mozika manaraka ny teninao miditra ao anatin'ny tontolo.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/30/83273/
 Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org: http://www.pri.org/stories/2016-05-26/how-hmong-song-tradition-kept-alive-american-midwest
 The Song Poet: A Memoir of My Father: http://www.amazon.com/Song-Poet-Memoir-My-Father/dp/1627794948
 Nandositra an'i Laos: https://www.pdsoros.org/news-events/2016/03/16/kao-kalia-yang-2003-fellow-chronicles-her-father-s-life-from-laos-to-minnesota-in-the-song-poet